ကမ္ဘာကျော်အမေရိကန်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်တဲ့ HP Product များကို Valentine Day အတွက်
အထူးရည်ရွယ်ပြီး ဖေဖော်ဝါရီ ( ၁၀ ) ရက်နေ့ တစ်ရက်ထဲသာ ရရှိမဲ့ အခွင့်အရေး ဖြစ်ပါတယ်…
1) ကွန်ပျူတာလိုတစ်မျိုး Tablet လို တစ်ဖုံ အသုံးပြုနိုင်ပြီး ၃၆၀ ဒီဂရီကွေးညွှတ်လို့ရမဲ့ HP X360
Notebook ( ၃ ) မျိုးကို ပုံမှန်ရောင်းဈေးမှ ၆၈၀၀၀ ကျပ် လျော့ချပြီးရောင်းချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်.
အရေအတွက် ကန့်သတ်ထားတဲ့အတွက် အမြန်ဆုံးဝယ်ထားမှ စိတ်ချရမယ်နော်…
2) ရုံးသုံးလုပ်ငန်းသုံး Printer ကို ရှာဖွေနေသူအတွက်လည်း ၂၃၁၀၀၀ ကျပ်တန် HP LaserJet MFP
M130A Printer ကို ၁၃၄၆၀၀ ကျပ် နဲ့ ( ၅ ) လုံးသာ ရောင်းချပေးသွားမှာပါ..
3) တခြား HP Notebook များကို ဝယ်ယူမဲ့သူများလည်း Special Cash Back 10 USD မှ 50 USD အ
ထိ သတ်မှတ် Model အလိုက် ရောင်းချသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်…HP Printer ဝယ်မည့်သူများအတွက်
လည်း HP Gift Set များကို လက်ဆောင်ရရှိသွားမဲ့ အခွင့်အရေး..
ဒါပဲလား… ? ဒါပဲလား… ? ဒါပဲလား… ?
HP ရဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် Product တွေကို လေ့လာကြည့်ရှုလို့ရမဲ့အပြင်………..
ပြပွဲကို လာရောက်လေ့လာသူတိုင်းအတွက် အမှတ်တရ လက်ဆောင်များအပြင် ပျော်စရာ
ကစားနည်းများကို ပါဝင် ကစား နိုင်ပြီး HP အမှတ်တံဆိပ်ပါ လက်ဆောင်များ ရရှိနိုင်မယ်….
HP ရဲ့ လှပတဲ့ Photo Booth မှာ အမှတ်တရ ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီး လက်ဆောင်တွေထုတ်ယူနိုင်မဲ့ အပြင်
Love Me Do… HP ရဲ့ Event မှာ Campaign တစ်ခုပြိုင်ပြီး Shangri-La Hotel ရဲ့ High Tea Buffet
Coupon ကို သင့်ချစ်သူနဲ့အတူတကွ သုံးဆောင်နိုင်မဲ့ အခွင့်အရေးလည်း ရှိမယ်နော်…
HP ရဲ့ePrint ကို ကိုယ်တိုင် စမ်းသပ်နိုင်ပြီး အမှတ်တရ ဓါတ်ပုံတွေလည်း ထုတ်ယူလို့ရမယ်…
တစ်ရက်တည်းသာ ပြုလုပ်တဲ့ အစီအစဉ်မို့လို့ လာရောက်လေ့လာဝယ်ယူဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ…
Date & Time : 10th Feb 2017 ( 10AM To 8PM )
Place. : Hledan Center Promotion Center
Intel® Celeron Processor(1.6GHz, up to 2.4GHz), 4GB DDR3L,500GB HDD, 11.6″ Diagonal High-Definition Bright View LED Backlit Touch Screen Display, LAN,Wireless 802.11b/g/n + Bluetooth, Camera, Bluetooth 4.0,3Cell Battery.Window 10 Singal Language /HP Orginal Bag
Aavashare Mym 08/02/2017 at 08:53 PM
Actually some IT products are cheaper in Myanamar than compared to Singapore, Thailand and even Hong Kong